Wararkii ugu dambeyeey Qaraxyadii iyo werarkii Muqdisho – Radio Daljir
Maarso 1, 2019 5:44 b 0
Qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa xalay ka dhacay dhismayaal ku yaalla Wadada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama magaalada Muqdisho, iyadoo khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen.
In ka badan 20 ruux ayaa ku geeriyooday qaraxyada oo sababay bur bur baaxad leh, waxaana qaraxa oo ahaa mid xooggan uu burbur u geystay qeyb ka mid ah dhismaha Hotel Maka Al-Mukarama, Maqaayadda Hilaac UK iyo dhismayaal kale oo ganacsi ahaa.
Dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna qiyaasay illaa afar nin ayaa gudaha u galay dhismo ku dhow Hotelka, halkaasoo dad rayid ah ay degan yihiin.
Wararka ayaa sheegaya inay qaldeen bartilmaameedkii ay rabeen, waxaana guriga ay galeen degenaa dad rayid ah oo ka koobnaa qoysas badan, waxaa la sheegay inay dileen aabihii guriga.
Dhismaha ay dableyda galeen ayaa isugu jiray kuwo la degenaa iyo ganacsi, waxaana tan iyo xalay laga maqlayay rasaas culus.
Ciidamada ammaanka ayaa hareereeyay dhismaha Guriga ay galeen dableyda hubeysan, waxaana tan iyo saaka ka soo dhacayay rasaas culus.
Ciidamada ayaa ku howlan inay soo afjaraan howlgalka, waxaana mararka qaar la maqlayay rasaas ka soo dhaceysay qeyb ay ku jiraan dableyda hubeysan
Wadada Maka Al-Mukarama ayaa ah saaka laga dareemayaa jawi colaadeed, marka la eego ciidamada buux dhaafiyay iyo burburka xooggan ee ka dhashay qaraxyadii xalay ka dhacay wadadaas.